IINDIDI ZEETHAYILE ZANGASESE - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iindidi zeethayile zangasese
Apha sabelana ngeentlobo ezithandwayo zeethayile zangasese kubandakanya imifanekiso yomgangatho kunye nodonga lwethayile, iingenelo kunye nokubi kunye nemibono yoyilo.
Amagumbi okuhlambela asendlwini yakho ahamba rhoqo ngabantu abaninzi, ke ufuna ukuqiniseka ukuba akhangeleka alungile. Inxalenye enkulu yoyilo lokuhlambela kwakho ngumgangatho kunye neethayile zodonga ogqiba ekubeni uzisebenzise. Nangona kunjalo, kukho ezinye izinto ezongezelelekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni-eyona iphambili kukuba lo mgangatho kufuneka uphathe kakuhle amanzi. Apha ngezantsi sijonga ezinye iindlela onokuthi ujongeke umkhulu kwaye umelane nento ebekwa kwigumbi lokuhlambela.
I-Porcelain okanye iTheric Tile
Ithayile yelitye lekalika / iTravertine
Iithayile eziGqibeleleyo zoMgangatho wokuhlambela kunye neendonga
Iithayile eziGqibeleleyo zoMgangatho oBucala wegumbi lokuhlambela
Masiqale ngenketho yeklasikhi kumgangatho wegumbi lokuhlambela: i-porcelain okanye iithayile zekheram. Olu khetho ludume kakhulu kuba luyathandeka kwaye luhambelana nohlahlo-lwabiwo mali nge- $ 1.09 kwisikwere ngasinye. Ungazifumana ezi tile phantse kuyo nayiphi na imilo okanye ipateni onokuyicinga.
Ukuba ujonge ukugcwalisa i-flooring yakho entsha njenge-DIY, kukho iinguqulelo ezithengiswayo ekunganyanzelekanga ukuba ubeke itayile nganye nganye. Ezi zinto zibekwe ngaphambili kwiphepha leplastikhi elinokubekwa ngokulula lize litywinwe endaweni.
Kukho umahluko omncinci phakathi kwe-porcelain kunye ne-ceramic kuloo porcelain luhlobo lwe ceramic enezinga eliphezulu lokufunxa. NgokweSiqinisekiso seTayile ye-Porcelain, iithayile ze-porcelain zinenqanaba lokufunxa elingange-0.5% ubukhulu. Oku kubenza babe lukhetho olukhulu kwigumbi lokuhlambela. Ukufumana eminye imifanekiso ndwendwela igalari yethu Imibono yethayile yangasese yangasese .
eyakhe neyakhe ehambelana neempahla zokudada
Enye yezona zinto zitsala kakhulu ze-porcelain kunye neetiles zeceramic, njengoko besesitshilo, kukungafani kwabo kuyilo. Ayisiyiyo kuphela eyahlukeneyo iimilo zethayile , Kodwa abaninimzi abaninzi basebenzisa iinkcukacha ezinjenge-grout enombala ukwenza uyilo lwabo lube lolwahlukileyo. Enye into ebalulekileyo malunga neceramic kunye ne-porcelain kukuba kulula ukuyicoca. Ukutshayela rhoqo kunye nokutshiza kuya kwenza ubuqili ecaleni kokucoca igrout ngamanye amaxesha.
Kukho iziphene ezimbalwa kwezi zinto. Kwelinye, ziyamtyibilika ngakumbi ngakumbi xa zimanzi. Ngethamsanqa, le yinto abaninimzi abaninzi abayijikelezayo ngokusebenzisa imethi yokuhlamba okanye ukuphakamisa iithayile zomgangatho. Abanye abayithandi loo ceramic ayigcini ubushushu, ke kuyabanda xa ungena kwigumbi lokuhlambela ezinzulwini zobusuku.
IVinyl tile lolunye ukhetho oluthandwayo kumagumbi okuhlambela. Oku, ubukhulu becala, ngenxa yokusebenziseka kwayo kunye nomtsalane wayo. Kukho iintlobo ezimbalwa ze-vinyl flooring onokukhetha kuzo xa kufikwa kumgangatho we-vinyl. Kukwanokufikeleleka kuqikelelo lweedola ezingama-0.95 ngenyawo lesikwere.
Kwenye, kukho iphepha le-vinyl floor. Olu khetho luyacetyiswa ukuba ulindele isixa esikhulu samanzi phantsi. Oku kuyiboleka kumagumbi okuhlambela-ngakumbi igumbi lokuhlambela labantwana. Esinye sezizathu zokuba kunje kungenxa yokuba ezi zingenayo imiqolo emininzi yokungena kwamanzi. Enkosi kumashiti amakhulu angena kuwo, amanye amagumbi okuhlambela akanakho ukungabinamthungo kwaphela.
Kwelinye icala, kukho i-luxury vinyl plank flooring. Olu luhlobo lophahla, endaweni yokuza kumaphepha, luza ngamaplanga amxinwa. Ezi zihlala zijikeleze i-intshi ezintlanu ububanzi kwaye ukuya kuma-intshi angama-48 ubude.
Ngaphandle kolu hlobo lomgangatho osebenza kakuhle ekuphatheni amanzi, liza phantse nasiphi na isitayile. Ke, unokufumana into esebenza ngayo nayiphi na indlela yokuhombisa oyisebenzisayo kwindlu yangasese.
Ngelixa unokufaka i-vinyl flooring njenge-DIY, kufuneka ulumke. Ukufumana ii-seams ngokuqinileyo kubaluleke kakhulu. Ukuba iiseams zinezikhewu, ayizukumelana namanzi njengoko ufuna ukuba njalo.
I-tile yamatye endalo lukhetho olubiza kakhulu, kodwa ikwayinto entle. Zininzi iindidi zamatye ezinokusetyenziselwa ukutyibilika, nangona kunjalo, kwaye ukukunceda wenze olona khetho lufanelekileyo, kufuneka sijonge ezinye iinketho zakho. Ezona ntlobo zaziwayo zamatye emvelo yimabhile, ilitye lekalika / itrvertine, igranite kunye nesileyiti.
Ithayile yeMarble yaziwa kakuhle ngobuhle bayo. Iza kuluhlu lweepateni kunye nemibala kwaye kunokubonakala ngathi akukho migangatho mibini yemabhile ifanayo. Ezinye zinemibala emininzi. Ezi mpawu zobuhle zenza kube lula ukuthelekisa imarble nakweyiphi na inkqubo yombala. Unokuxhomekeka kwimabhile ukuba uzise indlu yakho yokuhlambela kubukeka obuphezulu bobuhle be-regal. Ngokufana nezinye iindlela ezininzi esizijongileyo apha, imarble inokusikwa kubungakanani beetayile ezahlukeneyo kunye neemilo.
I-Marble iya kuba yinto ethandwayo kwaye isetyenziswe kuyo Iishawari zangasese nakwiitafile nakwimigangatho. Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ibhastile litywinwe ngokufanelekileyo ukuze liqiniseke ukuba lihlala ixesha elide njengoko linakho. Imarble ngokwendalo inembonakalo yentsingiselo yokuba ayilungiselelwanga kakuhle ngamanzi iyodwa. Uyakufuna kwakhona ukunqanda ukusebenzisa imichiza erhabaxa kuyo xa ucoca.
Eyona ngxaki inkulu yemarble kukuba iyathandeka ekuqhekekeni nasekukrwemeni. Uninzi lucebisa ukuba abaninimzi bathenge iithayile ezongezelelweyo ukwenza ukulungiswa njengoko kufuneka. Uyakufuna ukulumka kuba imarble iyaduduza xa iba manzi.
Imarble lukhetho olubiza kakhulu malunga ne- $ 10 ukuya kwi-20 yeenyawo ngonyawo wesikwere. Nangona kunjalo, lixabiso lokufumana ubunewunewu obugqithisileyo. Bona Okuninzi Uyilo lwemarble shawa Apha.
I-limestone ayinambala njengokhetho lwamatye njengemabhile. Ngelitye lekalika, unokufumana i-shades elula njengendlovu kunye ne-beige. Oku kukudibanisa uninzi lwabanini bamakhaya njengoko kulula ukudibanisa kunye nayiphi na indlela yokuhombisa. Ukuba usethwe kwiitoni ezimnyama, nangona kunjalo, unokufumana i-shades ebomvu okanye emdaka ngokunjalo. Ziyasetyenziswa kuninzi ezahlukeneyo iipateni zethayile ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezibonakalayo.
Ngokufana ne-porcelain luhlobo lwe-ceramic, i-travertine luhlobo lwe-limestone. Kuza kunye nemibala ezolileyo ukusuka kwabamhlophe ukuya kurusi. Kwisihloko sokubonakala kwelitye lekalika, le yenye yezinto ezixhamlayo ekubonakala kwelitye lendalo kwilitye ngalinye elisetyenzisiweyo kunendlela yendalo eyahlukileyo.
Ngalo naluphi na uhlobo lwelitye lekalika, unokuxhomekeka kulo ukuba uhlale ixesha elide ngaphandle kokubonisa ukunxiba kunye nokuqhekeka. Nokuba into ibinokuqhekeka okanye ukuqhekeka, iithayile kulula ukuzisusa zitshintshe.
Ukuze wenze ilitye lekalika ekugqibeleni kwigumbi lakho lokuhlambela, kuya kufuneka uqiniseke ukuba litywinwe ngokufanelekileyo kwaye lihlala linjalo. Ngokukodwa, ilitye lekalika lifuna unyango lokutywinwa kabini. Ukuphinda uthengise kwakhona kuya kunika ukujonga kwakho okukhazimlayo. Ngokubhekisele kufakelo ngokwalo, uya kufuna ukushiya oko kubaqeqeshi kuba iithayile zinzima kakhulu. I-limestone iyabiza, njengamatye endalo amaninzi. Jonga eli phepha le Izimvo zeshawa yokuhambahamba .
Granite yinto eqhelekileyo ukuba mhlawumbi sele uqhelene xa kufikwa imiphezulu yeetafile. Ikwalilitye lendalo elinokuba lukhetho oluhle kwimigangatho yakho yokuhlambela.
Esinye sezizathu zokuba igranite inale nto ilandelayo ngenxa yokuba yomelele kakhulu. Ngokungafaniyo namatye endalo esiwajongile ukuza kuthi ga ngoku, i-granite ayisiyonto intle. Ukukwazi kwayo ukumelana nokufuma rhoqo kuyenza ilungele izindlu zangasese. Kananjalo ayizukukrwela ngokulula okanye itshiphu, ke uya kuba nakho ukuxhomekeka kuyo ixesha elide.
Xa kuziwa kwinkangeleko, inyengane ibhetyebhetye. Iza kuluhlu lwemibala kunye neepateni enkosi ngokwahluka ekubunjweni kwegranite. Imibala esemgangathweni unokufumana inyengane kuluhlu ukusuka kumhlophe ukuya kumnyama ukuya kwi-beige kunye ne-browns kunye ne-blues kunye ne-reds. Uyilo olunemibala emininzi kunye neepatheni ziqhelekile ngokunjalo.
Iithayile zeGranite zinzima kakhulu, ke uya kufuna ukuqinisekisa ukuba umgangatho wakho unokuxhasa iithayile. Umzekelo, i-square yeenyawo .75-intshi enzulu yegranite yomgangatho wobunzima phantse iiponti ezili-13. Obu bunzima bunokuba nzima ukulawula kumakhaya amadala. Ingcinga efanelekileyo yokubonisana ngoncedo lobuchwephesha kolu fakelo.
Isibonelelo sokugqibela, sexesha elide somgangatho wegranite kukuba inokuphakamisa ixabiso lepropathi yekhaya lakho. Kungenxa yokuba ufake into enomtsalane eya kuhlala ixesha elide.
Isilayiti yenye yezona zinto zinamandla onokukhetha kuzo xa kufikwa ekukhetheni isitayile samatye endalo. Ngokwendalo iyamelana nokuqhekeka, ukukrwela, ukusika, okanye ukwaphula. Iya kutyabeka ishiywe yodwa, kodwa uninzi lofakelo lubandakanya ukutywina umgangatho ngokuchasene namabala. Olu hlobo lwe-flooring ludinga ukuthengiswa rhoqo ukuze lukhuseleke ekungcoleni.
Le nto ikwanezibonelelo zamanye amatye endalo kuba iza ngeendlela ezahlukeneyo. Ngenxa yolwakhiwo lwendalo, isiqwenga ngasinye sesileyiti sinokubukeka okukodwa, okunika igumbi lokuhlambela ubuntu obuncinci.
Umgangatho wesilayidi lukhetho olubiza kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, ihlala ixesha elide kwaye ithathwa njengokhetho olubalulekileyo. Yintoni enokwenza ukuthengwa kokuqala nokufakelwa lixabiso lolu khetho loyilo longeza kwixabiso lepropathi yekhaya lakho.
Ibhalansi yokugqitywa kokuqhekeka kufuneka ibhekiswe kumgangatho wokuhlambela. Ukugqitywa kokucoceka kunzima - ezi zirhabaxa kwaye azilingani. Oku kwenzelwe ukunceda ukunika umgangatho wokutsala kwaye kuhlala kugqityiwe kusetyenziswa kwiindawo ezimanzi. Ukuwa kokuqhekeka kokugqitywa kukuba abahlali kakuhle phantsi kweenyawo ezingenanto. Uninzi lokuhlambela alusebenzisi ucoceko, ke oku kuthetha ukuba uya kufuna ukulumkela indawo emtyibilizi xa uphuma kwishower.
Uyakufuna kwakhona ukuqwalasela ubunzima besilayidi ngendlela obuya kwenza ngayo ngegranite. Kungcono kakhulu ukuba ushiye olu fakelo lube yingcali eqeqeshiweyo.
Iithayile zikaMoses azenziwanga ngento enye. Unokwenza ubuchwepheshe bokwenza i-mosaic tile flooring ngaphandle kwayo nayiphi na into- iglasi, ithayile, okanye ilitye. Yintoni eyenza la matye iithayile zemibala kukuba asetyenziswa kwizicucu ezincinci ukwenza uyilo olukhulu. Oku akufuneki ukuba kube yinto yesiko lomfanekiso wobugcisa. Uyilo lunokuba nje- kwaye luhlala luthetha ukuba luyindlela yokuyila.
Iithayile zikaMoses zikwalula ukuzicoca kwaye aziyi konakaliswa ziikhemikhali zakho zokucoca eziqhelekileyo.
Enye into ebalulekileyo malunga ne-tile mosaic flooring kukuba yindlela efanelekileyo yokusebenzisa izinto zamaphupha akho ngexabiso elingaphantsi. Ukungathethi, iipateni ezenziwe ngezi zinto ziya kuba zihluke ngokupheleleyo, zinike ikhaya lakho ukuthintela.
Zimbini izinto ezingahambeli kakuhle kwithayile kaMoses. Ngenye, zincinci, iinguqulelo ezaphukileyo zemathiriyeli esetyenziswayo. Obu bungakanani bubenza ukuba babe semngciphekweni womonakalo. Kuya kufuneka ulumke xa uqhekeka kwaye uqhekeza - ukulahla izinto ezinkulu phantsi kunokubangela iingxaki. Ukukrwela kukwayinto eqhelekileyo ukukhathazeka ngetayile kaMoses. Ngethamsanqa, ukuba ithayile iyonakala, kunokuba kulula ukuyibuyisela.
Okwesibini, iithayile ze-mosaic azinakho ukubambeka okuninzi. Oku kuthetha ukuba uya kufuna ukuqiniseka ukuba ubeke ibhedi yokuhlambela phantsi ukunciphisa iziliphu nokuwa.
Indlela yefashoni kunye neyodwa yokwenza igumbi lokuhlambela ligqibe kukusebenzisa iithayile zeglasi phantsi. Ezi zinokutyhafiswa ngemibala eyahlukeneyo kunye neetoni kwaye iithayile zinokumiliselwa ukongeza ukongezwa okukodwa kokuchukumisayo kuyilo. Iithayile zeglasi ziyacetyiswa ukongeza ubunzulu kuyilo ngokunjalo.
Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ufumana iiglasi ezilinganiselwe ukusetyenziswa kwimigangatho. Iglasi kwiifestile zakho ayifani neglasi esetyenziselwa imigangatho. Le nto yenye yezona zinto zibiza kakhulu, ukusuka kwi-7 ukuya kwi-30 yeedola okanye nangaphezulu kwenyawo nganye.
Umzobo omkhulu kwiglasi yeglasi yindlela entle ngayo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, inokusetyenziswa gwenxa ngeendlela ezininzi apho unokufumana khona isitayile esilingana phantse nalo naluphi na uyilo onokuphupha ngalo. Iglasi nayo ayifunxi amanzi kakuhle, ke awunakukhathazeka ngamanzi atshabalalisa ukubonakala kwayo. Ngelixa lisenokutyibilika, ukuba usebenzisa iithayile ezincinci zeglasi, kunciphisa ubungozi obunokubangela.
Uya kufuna ukuqiniseka ukuba ufakelo lweglasi lufakelwe yingcali. Le ayisiyonto ekufuneka ithathwe njenge-DIY. Ukongeza, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba unobungcali obuqheleneyo nokusebenza nomgangatho weglasi. Uninzi lweekhontraktha ngokubanzi alunaso isakhono esikhethekileyo sokufaka imigangatho yeglasi.
Umthi usenokungavakali njengokukhetha okusemgangathweni kwigumbi lokuhlambela. Emva kwayo yonke loo nto, ayisoloko ithathwa njengokusetyenziswa kwiindawo ekulindeleke ukuba zimanzi rhoqo. Ewe, inyani kukuba, kuxhomekeke kuhlobo luni lomgangatho owusebenzisayo. Olunye uhlobo oluchanekileyo ekusebenziseni umgangatho wokwenziwa kweenkuni kwigumbi lokuhlambela kukukhetha ukhuni olukhangeleka kumgangatho wethayile.
Ngelixa iinkuni ezingenanto ayiyongcamango ilungileyo yokusebenzisa kwigumbi lakho lokuhlambela, iinkuni zobunjineli zinokuba yenye indlela eyamkelekileyo. Isizathu sokuba i-flooring yokhuni eyenziwe ngobunono yenza kakuhle ukufuma ngenxa yesiseko seplywood. Uluhlu oluphezulu lwenziwe ngomthi kwaye lukhangeleka njengawo nawuphi na umgangatho wokhuni oluqinileyo. Ungayifumana le nto yaphantsi komhlaba ngemibala eyahlukeneyo kunye noyilo. Yeyona khetho ifanelekileyo ukuba unqwenela ukuba ube neenkuni zendalo kwindawo yakho yangasese.
Oko kuthethiweyo, iinkuni zobunjineli zisengumthi. Uya kuma ukufuma okungcono kunomthi oqhelekileyo, kodwa awuzukuphatha ukufuma kunye nezinto ezifana ne-porcelain. Ukufuma kunokubangela ukuba iinkuni zikhule zize zande. Ukuthintela oku, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba uwuvale kakuhle umgangatho. Ikwangumbono olungileyo ukusebenzisa isincamathelisi esiphakathi kwamaplanga ukuqinisekisa ukuba amanzi akanakungena ngokutyhoboza. Into elungileyo, nangona kunjalo, kukuba umthi awuyi kubanda ukunyathela ezinzulwini zobusuku okanye into yokuqala kusasa njengetayile.
I-2 yeminyaka yokukhumbula izimvo zentombi
Iithayile zentsimbi azithandwa njengakwimigangatho yokuhlambela njengoko zinjalo ngeendonga zangasese. Nangona kunjalo, ziyindlela entle yokongeza umnxeba wangoku ekhayeni lakho.
Kuya kufuneka uyazi ukuba intsimbi ayinayo enye, imbonakalo yemizi-mveliso. Unokufumana insimbi engenasici, i-metallic steels, kunye ne-glass hued steel. Ngaphezulu koko, iithayile zentsimbi ziza ngeendlela ezahlukeneyo. Ngelixa unokufumana i-tile ecacileyo, egudileyo, uninzi lusebenzisa iipatheni ezibhaliweyo zokuzisa ubume kwigumbi lokuhlambela. Ezi zinokuba ziimilo ezilula zejiyometri kodwa zinokuba nemifanekiso eneenkcukacha kunye nezobugcisa. Le yokugqibela yinto edla ngokukhethwa xa kusetyenziswa isinyithi kwi-backsplash okanye eludongeni. Iithayile zentsimbi ezihonjiswe kakhulu zisetyenziswa ecaleni kwezinye iintlobo zethayile.
Isinyithi senza kakuhle ngamanzi, kodwa kuya kubanda phantsi kweenyawo. Inokutyibilika kwakhona xa imanzi kodwa uyilo olunemiyalezo emininzi lunokusebenza ngcono ekuncedeni ukuthintela ukutyibilika nokuwa.
Iithayile zamatye zihamba ngegama lomlambo ilitye lelitye. Njengoko igama libonisa, oku kwenza ukuba umgangatho wakho ubukeke ngathi ugqunywe ngamatye amancinci - iingqalutye. Olu lukhetho oluhle kubanini bamakhaya abafuna ukubonakala kwendalo kumgangatho wabo. Enkosi ngobume babo kunye nokuhombisa, ezi tile zerubhi zibolekisa ukubonakala kwendalo nangaphezu kwelitye lendalo.
Igama lomlambo ilitye leengqalutye lichanekile kwaye liyachaza. Njengamatye omthi uwabona ngaphandle, ukufumana amanzi kumgangatho wakho akuyi kungcolisa okanye ukonakalisa iingqalutye.
Olu ayilulo ukhetho olusetyenziswa rhoqo, ke uya kuba nembonakalo eyahlukileyo yokwenyani kwigumbi lokuhlambela ngezi tile zelitye. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le migangatho ayalingani. Ke, ngelixa ingekuko ukubuyela umva ngamatye, abanye abaninimzi banokungayixabisi imvakalelo yengqalutye ezinyaweni ezingenanto. Oku kuhlala kuncitshiswa ukusondela kunye okanye ukugcoba ngakumbi amatye asetyenziswayo.
Impazamo enye ebekwe kwilitye yinto yokugcina olu hlobo lomgangatho lucocekile. Ndiyabulela kutshintsho lokuphakama kwaye ngamanye amaxesha ii-nooks ezixineneyo kunye neekhenikhi phakathi kwamatye, kunokuba nzima ukutshayela okanye ukukorobha iithayile zomgangatho.
Iithayile ezilungileyo kumgangatho wakho wokuhlambela kunye neendonga zixhomekeke kwizinto ezininzi kubandakanya ukuthanda kwakho. Umzekelo, luthini uluhlu lwamaxabiso akho? Zeziphi izinto ozijongileyo? Yintoni imbonakalo ofuna ukuba nayo emgangathweni? Izinto ezilungele umntu omnye zisenokungabi yile nto uyikhangelayo.
Ngelixa le mibuzo kufuneka iphendulwe buqu, sinokujonga ezinye zezona zikhetho zithandwayo kumagumbi okuhlambela ngokubanzi.
Ngomhlaba, izinto ezithandwa kakhulu ziiporcelain kunye neetiles zeceramic. Oku kwenza ingqiqo enkulu njengoko ezi zikhetho ezinokufikeleleka. Kananjalo lukhetho oluhlala luhleli kunye nenqanaba lokuntywila emanzini, okwenza ukuba kube lukhetho olufanelekileyo kumagumbi okuhlambela.
Emva kwezi zinto, ezinye iindlela zokuhombisa ziqala ukulima. Emva kwekheramic, ezi-3 zilandelayo zithandwa kakhulu yimarble, i-mosaic tile kunye nelitye lekalika. Ezi zinto zithathwa njengezinye zezinto ezinomtsalane kwigumbi lokuhlambela. Kwimeko yemabhile kunye nelitye lekalika, kukho inani elingenakubalwa loyilo olwenzeka ngokwendalo. Iithayile zikaMoses zikwathandwa ngenkangeleko yazo kwaye azizi ngexabiso elininzi njengetayile eziqinileyo zamatye endalo.
Xa uyila igumbi elincinci, ufuna ukuqinisekisa ukuba wenza ukhetho olufanelekileyo ukuze ulisebenzise kakhulu eli thuba. Ukwenza oku, kuya kufuneka ucinge ngenjongo.
Iithayile ezimhlophe zisebenza kakuhle kwindawo encinci kuba inika igumbi umoya oqaqambileyo, owamkela ngakumbi. Iithayile ezinkulu zinokunceda ekwenzeni ukukhohlisa kwendawo engaphezulu.
Uyakufuna kwakhona ukuqaphela iipateni zethayile. Ukubeka ngokulula itiles enye yesikwere ecaleni kwenye akunakwenzeka ukuba kusetyenziswe kakuhle isithuba. Endaweni yoko, umzekelo, nika iithayile ezi-hexagonal kwipateni yeheringbone uzame ukwenza igumbi lokuhlambela libukeke likhulu. Ukuba ufuna ukusebenzisa iithayile ezinkulu zesikwere, zama iithayile zelitye lendalo ngepateni enomdla. Iithayile zemigca ye-DRM lukhetho oluluncedo xa uzama ukwandisa indawo kunye nokwenza ukubonakala kwegumbi elikhulu.
Unokongeza ubuhle obuhle ngakumbi ngokusebenzisa iithayile ozisebenzisayo kumgangatho wakho kwishawari yakho. Olu hlobo loyilo lwethayile olungenamthungo kunye nolufanayo lwenza igumbi lokuhlambela libonakale likhulu.
Ukuba ucinga ukwenza kwakhona imigangatho yakho kukho ezininzi Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo ezinokunceda. Sebenzisa enye yezi nkqubo kunokukunceda wenze uyilo usebenzisa ubume bamagumbi akho kwaye ungeze ukugqiba kwakho, ithayile kunye nomgangatho ukuze ufumane iziphumo ozifunayo.
uthini umahluko phakathi kwesuti kunye netuxedo
18 'x 18' Ithayile yeGranite eKhazimlisiweyo kwiGlass emnyama $ 79.95 umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Redi Shade 1614494 Igumbi loqobo Dar… $ 30.99 umthengisi ogqibelele (2364) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Stainless engena Pebble F ... $ 18.99 umthengisi ogqibelele (4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
amakhonkco ukuze ufumane intombi yakho
Elena delle donne kunye noAmanda Clifton